Tattoos Crystal Ball: sixir iyo sir ah | Tattoo
Tattoo kubbada Crystal: walxaha qarsoodiga ah iyo kuwa qarsoodiga ah
Antonio Fdez | | Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos'
Shukaansi, qarsoodi iyo dhiirigelin riyada. Kubadaha Crystal marwalba waxay soo jiiteen dareenkeena hal dhinac ama mid kale. Sababtoo ah qurxinta kirismaska ​​ee caadiga ah ee aan ka helno nooc ka mid ah jawiga xilliga qaboobaha oo aan ugu ekaysiin karno baraf kaliya ruxitaanka ama u adeegsiga qiyaasta mustaqbalka, waxay astaan ​​u yihiin khiyaali iyo sixir. Taasi waa sababta looga hadlayo Tattoo kubbadda crystal waa in laga sameeyo dhammaan calaamadahaas.
Waa nooc ka mid ah tattoo-yada oo, aan soo sheegnay, u adeegi kara inay dib noogu celiso carruurnimadeenna ama daqiiqado farxadeed oo ku noolaa daqiiqad cayiman. Dad badan ayaa sameeya a Tattoo kubbadda crystal Waxay doortaan muuqaal xusuusinaya xusuus farxadeed oo ay kula noolaayeen qoyskooda, asxaabtooda ama lamaanahooda. Waa hab aad nagula qaadaneyso sawir muuqaal qurxoon.
Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira kuwa doorta inay sawiraan kubbada caadiga ah ee loo yaqaan 'crystal ball' ee ay sixiroolayaasha, sixiroolayaasha ama indhoolayaashu u isticmaalaan inay ku arkaan mustaqbalka. Xaaladdan oo kale, haddii aan baaris ku sameyno shabakadda naqshadaha kubbadda Crystal crystal, waxaan arki doonaa in qaar badani ay isku daraan iyaga oo leh «marwada kacsiga», Taasi waa, a naag gus. Nooc tattoo ah oo leh sicir qoto dheer oo astaamo ah oo isku dhafan dhaqamo dhowr ah iyo qarsoodiga ah in la arko dhacdooyin aan weli dhicin.
Intaa waxaa dheer, iyo haddii aad eegto waxyaabaha soo socda sawirka Crystal tattoo tattoo, waxaad arki doontaa inay jiraan siyaabo kala duwan oo loo heli karo qaabkan loo sawiray. Waxaa jira kuwa raadinaya tattoo qaab macquul ah halka kuwa kale doorbidaan inay helaan tattoo dhaqameed ama wax fudud oo yar oo adeegsanaya kaliya duluc wanaagsan oo jilicsan oo madow ah. Si kastaba xaalku ha ahaadee, dhammaantood waa xulashooyin aad u xiiso badan oo aan tixgelin karno haddii aan qorsheyneyno inaan helno nooca noocan oo kale ah.
Sawirada Crystal Ball Tattoos
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos' » Tattoo kubbada Crystal: walxaha qarsoodiga ah iyo kuwa qarsoodiga ah
Tattoo canab ah oo leh ubax
Tattoo loogu talagalay in lagu calaamadeeyo koorsada noloshaada: jaantusku wuu kacay